I-Coorong Waterfront Retreat, indlu yeholide
Jabulela ukubukwa okuhle kwamanzi angaphazamiseki asuka kule ndlu yamaholide equkethwe wena ebheke e-Coorong National Park.
Kuhamba amahora ama-2 nje ukusuka enkabeni ye-Adelaide. Yindawo ekahle yokuphumula nokuziphumuza. Jabulela igumbi lokuphumula elinepulani elivulekile, indawo yokudlela yangaphakathi nangaphandle, ikhishi elihlome ngokuphelele, izinsiza zokuwasha, ingadi yendabuko ebukeka kahle kanye nengadi yasekhishini.
I-Coorong Waterfront Retreat ilala abantu abangafika kwabayisi-6 emibhedeni engusayizi wezindlovukazi emi-3.
Umamukeli we-Tourism SA Siver Medal Award.
I-Coorong Waterfront Retreat ingenye yezindawo zokuhlala ezincane ezibheke ngqo eCoorong (ichibi). Ngeke usondele emanzini kuphela kodwa uzojabulela ukubukwa kwamanzi okumangalisayo okuvela endlini. Thatha ithuba le-WiFi yamahhala, lungisa isivunguvungu ekhishini eliqukethwe ngokugcwele, thola ilondolo yakho ngenkathi usohambweni, vuselela endaweni yokugeza yamabhamuza noma uhlale eduze komlilo ovulekile futhi ujabulele ukubuka kwamanzi okumangalisayo. Noma yini oyenzayo siyaqiniseka ukuthi uzokujabulela ukuhlala kwakho.
5.0(40 okushiwo abanye)
Pakisha ipikiniki futhi uhlole izindlela zokuhamba ze-Coorong National Park. Sebenzisa ama-kayak anikeziwe bese ugwedla emanzini uye ezindundumeni zesihlabathi lapho ungakwazi ukugoqa udlulele ogwini lolwandle. Khona-ke futhi ungase ufune ukuvele uhlale eduze komlilo futhi ujabulele ukubuka okumangalisayo kwamanzi.
Sihlala eduze ngakho siseduze ukuze sixoxe noma uma kukhona okudingayo. Singathanda ukuhlangana nawe kodwa sihloniphe ubumfihlo bakho ngakho sizokushiyela ukukhetha ukusebenzisana.